Tag: ruzivo | Martech Zone
Econsultancy's Mushandisi Chiitiko Ongororo Ongororo, inoitiswa mukubatana ne WhatUsersDo - yepamhepo yekushandisa yekuyedza uye yemushandisi ruzivo rwekutsvagisa saiti - yakafumura manhamba. 74% emabhizinesi anotenda ruzivo rwevashandisi kiyi yekuvandudza kutengesa, shanduko uye kuvimbika. Chii chinonzi Chiitiko cheMushandisi? Zvinoenderana neWikipedia: Ruzivo rwevashandisi (UX) inosanganisira manzwiro emunhu nezvekushandisa chimwe chigadzirwa, hurongwa kana sevhisi. Chiitiko chevashandisi chinoratidzira chinoitika, chinobatika, chine musoro uye chakakosha mamiriro ekubatana kwevanhu-komputa uye
Svondo, July 8, 2007 China, Gumiguru 23, 2014 Douglas Karr
Kutenda André kune yangu yekutanga tip chikumbiro mune mumwe mutauro! Lendo.org: Kutenda kuGoogle Dudziro, ini ndakakwanisa kunyatsoverenga zvakatumirwa uye kunyatso tarisa pane ino saiti. André blogger ane nyasha uye iwe unogona kutaura mukunyora kwake, ari kuzviita kugovana kuda kwake nevateereri vake.